खिचरा महोत्सवको तयारी चितवनमा सुरु – Saurahaonline.com
खिचरा महोत्सवको तयारी चितवनमा सुरु
चितवन, २८ कात्तिक । चितवनमा पाँचौ खिचरा महोत्सवको तयारी भइरहेको छ । प्रत्येक वर्ष पूर्वी चितवनमा आयोजना हुँदै आएको महोत्सव यो पटक पौष २८ गतेदेखि आयोजना हुने तयारी गरिएको हो । महोत्सव आयोजना गर्नका लागि थारु कल्याणकारिणी सभा क्षेत्र नं ७ का सभापति नारायण महतोको संयोकत्वमा महोत्सव व्यवस्थापन मुल समिति समेत गठन गरिएको छ ।
खैरहनी नगरपालिकाको वडा नं. ५, जबकौली स्थ्ति गौचरनमा यो पटक पनि महोत्सव आयोजना गरिने महोत्सव व्यवस्थापन मुल समितिका संयोजक नारायण महतोले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार महोत्सव सफल बनाउन विभिन्न उप समितिहरु गठन भएका छन् । यो पटक महोत्सवमा थारु सांस्कृतिक हस्तकला निमार्ण प्रतियोगीता, थारु सांस्कृतिक सामग्री प्रदर्शनी लगायत, थारुहरुको परम्परागत खानाका परिकारलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिने छ । यो संगै अन्य व्यवसायीक स्टल देखि बाल उद्यान लगायत अन्य सांस्कृतिक मनोरञ्जनात्मक गतिविधिलाई निरन्तरता दिने तयारी छ । अन्य गतिविधिहरुको विषयमा भने आन्तरिक छलफल र परामर्श जारी रहेको मुल समारोह समितिका संयोजक महतोले जानकारी दिनुभयो ।
मेलालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आर्थिक व्यवस्थापन समिति, प्रचार प्रशार समिति, स्टल व्यवस्थापन समिति, समन्वय समिति, शोभायात्रा व्यवस्थापन समिति, कृषि परिसर व्यवस्थापन समिति, सुरक्षा व्यवस्थापन समिति, मञ्च व्यवस्थापन समिति, टिकट व्यवस्थापन समिति, प्रविधि व्यवस्थापन समिति, सांस्कृतिक व्यस्वस्थापन समिति, थारु सांस्कृतिक प्रदर्शनी व्यवस्थापन समिति, खानेपानी व्यवस्थापन समिति, सरसफाई व्यवस्थापन समिति, पार्कीङ्ग व्यवस्थापन समिति, आन्तरिक लेखा व्यवस्थापन समिति, शैक्षिक तथा खेलकुद व्यवस्थापन समिति लगायत ३१ वटा विभिन्न उप समितिहरु गठन भएका छन् । पाँचौ खिचरा महोत्सवको तयारी सँगै स्टल बुकिङ्गका लागि सचिवालय समेत खुल्ला गरिएको छ ।
सचिवालय खुल्ला भएसँगै व्यवसायिक स्टल बुकिङ हुने क्रम सुरु भइसकेको छ । यो पटक खिचरा महोत्सव अवलोकनका लागि प्रवेश शुल्क भने निर्धारण भइसकेको छैन । आगामी शनिवार पुन बैठक बसेर प्रवेश शुल्क निर्धारण गरिने टिकट व्यवस्थापन समितिका संयोजक दीपेन्द्र चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
रत्ननगर जेसिजद्धारा भित्तेपात्रो विमोचन २०७८, ७ बैशाख मंगलवार
सुनको भाउ घट्यो, प्रति तोला कति ? २०७८, ७ बैशाख मंगलवार
नारायणगढ-मुग्लिन खण्डको जलबीरे पुल तयार २०७८, ७ बैशाख मंगलवार